Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah - Suuqa Kirismaska ​​ee Schmidt Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah– Suuqa Kirismaska ​​ee Schmidt
Ilaalinta macluumaadkaaga gaarka ah ayaa ah mudnaantayada. Bayaanka asturnaanta wuxuu khuseeyaa www.SchmidtChristmasmarket.com iyo www.allarkllc.com. oo xukuma xog ururinta iyo adeegsiga. Ujeeddooyinka siyaasaddan asturnaanta, haddii aan si kale loo sheegin, dhammaan tixraacyada Suuqa Kirismaska ​​ee Schmidt waxaa ka mid ah www.SchmidtChristmasmarket.com.
Suuqa Kirismaska ​​Schmidt degelku waa websaydh e-commerce ah. Adoo adeegsanaya Suuqa Kirismaska ​​Schmidt bogga internetka, waxaad ogolaatay dhaqamada xogta ee lagu sharaxay bayaankan.
Ururinta Macluumaadka Shaqsiyeed
Suuqa Kirismaska ​​Schmidt waxay aruurin kartaa macluumaadka lagu aqoonsan karo shaqsiga, sida magacaaga, cinwaanka emaylka, iyo cinwaanka boostada. MA keydinayno wax macluumaad bixin ah.
Suuqa Kirismaska ​​Schmidt waxay kugu dhiirigalinaysaa inaad dib u eegto hadalada asturnaanta ee degellada aad doorato inaad ku xirto Suuqa Kirismaska ​​Schmidt si aad u fahmi karto sida websaydhyadaasi wax u soo ururiyaan, una adeegsadaan macluumaadkaaga.
Magaca iyo cinwaanka shaqada
Macluumaadka lala xiriiro cinwaanka emailka
Macluumaadka ilbaxnimada sida waraaqaha boostada, doorbidka iyo danaha
Macluumaadka kale ee la xiriira baaritaannada macaamiisha iyo / ama dalabyada
Waxaa naga go'an inaan hubino in macluumaadkaagu yahay mid amaan ah. Si looga hortago isticmaalka aan la oggolaan ama soo bandhigin, waxaan ku dhejinay habab jireed, elektarooni ah iyo maamul maamul ah si aan u ilaalino oo aan u hubino macluumaadka aan soo qaadanno internetka.
Shuruudaha & Shuruudaha SMS: Ka dooro suuq-geynta SMS-ka iyo ogeysiisyada waxay ku dhacaan adoo galaya lambarka taleefankaaga bogga wax-iibsiga iyo bilaabista wax iibsiga, ku-qoritaanka foomka rukunka, ama aad u dirto ereyga muhiimka ah Adoo dooranaya ogeysiisyada suuq geynta SMS, waxaad ogolaatay shuruudaha iyo xaaladaha soo socda: Waad fahantay oo aad oggoshahay in ogolaanshuhu uusan ahayn wax shuruud u ah iibsasho kasta. Waad fahantay oo aad ogolaatay in lambarka taleefankaaga, magacaaga, iyo macluumaadka iibkaaga lala wadaagi doono barxadayada suuq geynta ee SMS Consistent Cart, oo ay abuureen CartKit Inc, oo ah shirkad xafiis ku leh Atlanta, GA, USA. Waad fahantay oo aad ogolaatay in xogta la soo ururiyay loo isticmaali doono in laguu soo diro ogeysiisyada (sida xusuusinta gaadhiga la iska dhaafay) iyo farriimaha suuqgeynta la beegsanayo. Markaad dirto farriimaha SMS-ka ah, lambarkaaga taleefanka waxaa loo gudbin doonaa lammaanahayada gudbinta ee SMS si loo buuxiyo gudbinta farriinta. Waad fahantay oo aad oggoshahay haddii aad rabto inaad ka baxdo ka-helitaanka inaad hesho fariimo dheeraad ah oo suuq-geyn ah iyo ogeysiis ku soo celi JOOJI fariin kasta oo naloo soo diro. Waad fahantay oo waad oggoshahay in qaababka kale ee looga baxo, sida adeegsiga ereyo kale aysan noqon doonin hab macquul ah oo looga baxo. Waad fahantay oo aad ogolaatay in farriimaha iyo sicirka xogta la adeegsan karo marka la helayo farriimaha SMS.
All ARK LLC dba Schmidt Suuqa Kirismaska
3 goobeed amberglow goobeed
Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah wuxuu si adag ugu xaddidan yahay Barnaamijka wax saameyn ahna kuma yeelan doono siyaasad kale oo gaar ah (ies) oo xukumi karta xiriirka naga dhexeeya annaga iyo xaaladaha kale.
Haddii aad wax su'aalo ama walaac ah aad ka qabtid siyaasaddan, waa inaad nagala soo xiriirtaa halkan Taageero @schmidtChristmasmarket.com